1:31 pm, बिहीबार, कात्तिक २८, २०७६
मेलै मेरो यो बिश्लेषणमा टेस्लालाई एप्पलसँग, मोडल ३ लाई आइफोनसँग र इलन मस्कलाई स्टिभ जब्ससँग तुलना गरेको छु । तर, यसमा म कहाँ संघर्ष गरिरहेको छु भने, के टेस्ला एप्पल जस्तै सफल बन्ला ? के टेस्लाले आइफोन जस्तै फ्रान्चाइज बनाउला ? अनी इभीको बजार हिस्सा पनि बढाउला ?
टेस्लालाई केही सहजताहरु छन् । उसँग अरु जस्तो ग्यासोलिन गाडी बनाउँदाको सम्पतिको भारी छैन । र, त्यसैले उ अविश्वसनिय ढंगले आफ्नो काममा एकाग्र र केन्द्रित छ । उसका अन्य प्रतिबद्धताहरु छैनन् । इभीले काम गरेन भने उसँग अरु कुनै योजना छैन । यो एकोहोरोपनाले उसलाई सहजता दिलाएको छ, आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुलाई भन्दा ।
अटो क्षेत्रमा ब्राण्ड परिर्वतन गर्न कुनै ‘स्विचिङ कस्ट’ लाग्दैन । ब्राण्ड प्रतिको बफादारिता त हुन्छ तर, गाडी परिर्वतन गर्नका लागि ग्राहकलाई एउटा ‘टेस्ट ड्राइभ’ नै काफी हुन्छ ।
टेस्लाको अग्रगामी सोचले उसलाई आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरु भन्दा निरन्तर रुपमा बर्षौं अगाडी पुर्याइरहेको छ । बिज्ञापनको लागि शुन्य खर्च गरेपनि इलन मस्कको २ करोड ७० लाख ट्वीटर फलोअरहरुका कारण उ अहिले विश्वको आइकोनिक ग्लोबल ब्राण्डको रुपमा रहेको छ । उसँग परिआएको खण्डमा हप्ताको १ सय घण्टा काम गर्ने र कारखानामै सुत्ने संस्थापक छन् । टेस्ला ब्याट्री र सफ्टवेरको विकासमा प्रतिस्पर्धीहरु भन्दा बर्षौं अगाडि छ । र, ‘सेल्फ ड्राइभिङ’को सन्र्दर्भमा पनि टेस्लाले गुगल वा अन्य प्रतिस्पर्धीहरुलाई पछाडि छाडेको छ ।
टेस्लाको प्रतिस्पर्धीहरुको अर्को समस्या भनेको उनीहरु नाफा कमाइरहेका छन्, लाभांश वितरण गर्छन् र त्यसकारण नोक्सानीको जोखिम बहन गर्न सक्तैनन् ।
के टेस्ला अर्को एप्पल हो ?
अस्तित्वमा आएको केही वर्षसम्म आइफोन बजारमा रहेका अन्य फोनहरु भन्दा उन्नत थियो । अहिले एनड्रोइमा चल्ने फोनहरु आइफोन भन्दा सस्तो र धेरै फिचर भएका छन् । तर, आफ्नै सफ्टवेर भएको र फोनका विभिन्न फिचरहरु आइफोनमा मात्र चल्ने भएका र अन्य ब्राण्डको फोन फेर्नु पर्दा ‘स्विचिङ कस्ट’ (थप लागत) लाग्ने भएका कारण मानिसहरु प्रत्येक २–३ वर्षमा नयाँ नयाँ आइफोन फेरिरहन्छन् ।
तर, टेस्लालाई एप्पलको जस्तो यस्तो सुबिधा उपलब्ध छैन । अटो क्षेत्रमा ब्राण्ड परिर्वतन गर्न कुनै ‘स्विचिङ कस्ट’ लाग्दैन । ब्राण्ड प्रतिको बफादारिता त हुन्छ तर, गाडी परिर्वतन गर्नका लागि ग्राहकलाई एउटा ‘टेस्ट ड्राइभ’ नै काफी हुन्छ । इभी चलाउँदाको गजबको अनुभुति र ‘टर्क’को झट्का टेस्लाले मात्र दिन सक्छ भन्ने छैन ।
आइफोन शुरुमा कुनै स्मार्टफोनहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको थिएन । पुराना मोडलका सामान्य फोनहरुसँग प्रतिस्पर्धामा थियो । तर, टेस्ला नयाँ इभीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छैन । विश्वब्यापी रुपमा विक्री भइरहेका ८ करोड ६० लाख कम्बस्चन इन्जिनयुक्त गाडीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ टेस्लाले । यदि टेस्ला केही समयको लागि टिक्यो र नाफा कमाउन सफल भयो भने उ केही वर्षमा वार्षिक केही लाख कार उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा हुनेछ ।
एउटा पक्का कुरा चाँही के हो भने जसरी कुनै मानिस स्मार्ट फोन चलाउन शुरु गरेपछि फेरी पुरानो मोडलको फोनमा फर्कन सक्तैन, त्यसैगरी इभी चलाउन शुरु गरेको मानिस पनि ग्यासोलिन कार तर्फ फर्कदैंन । तर, के त्यो इभी टेस्ला नै हुने छ त ? अहिले त टेस्ला नै हुने जस्तो देखिन्छ । तर, भविष्यको बारेमा केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
टेस्लाको आकार कत्रो छ ?
टेस्लाको सेमी–ट्रक अथवा पूर्ण स्वचालित कारहरुले आगामी ५ वर्षमा दिनको घाम देख्लान वा नदेख्लान्, यसै भन्न सकिदैंन ।
मानौं, टेस्लाले औसतमा ४० हजार डलरको मूल्यमा कार विक्री गर्नेछ । हाल अमेरिकामा औसत कारको मूल्य ३८ हजार डलर छ । टेस्ला चलाउँदा इन्धन कम खपत हुने र ‘मेन्टिनेन्स’ खर्च पनि कम लाग्ने भएका कारण यहाँ टेस्लाको औसत मूल्य २ हजार डलर बढि राखिएको हो । वास्तवमा अहिले टेस्ला ५० हजार डलरको औसत मूल्यमा विक्री भइरहेको छ ।
अहिले टेस्लाको कुल खर्च (अनुसन्धान तथा विकास, सामान्य खर्च, ब्याज) बार्षिक ८ अर्ब डलर पुग्ला भनेर अनुमान गरौं । यो हिसाबले टेस्लाको कर अघिको आम्दानी बार्षिक ८ अर्ब डलर पुग्नेछ । त्यो बेला उसको कुल बजार पूँजीकरण ८० अर्ब डलर पुग्नेछ ।
अब मानौं, टेस्लाले भविष्यमा वर्षको २० लाख कार विक्री गर्नेछ । जेनरल मोटर्स र टोयोटाले १ करोड हाराहारीमा गाडी विक्री गर्दै आएका छन् । त्यसैले यहाँ टेस्लाले अमेरिकी बजारको ५ प्रतिशत र विश्व बजारको १ प्रतिशत हिस्सा लिनेछ भनेर यहाँ अनुमान गरिएको छ ।
अब टेस्लाले प्रति गाडी २० प्रतिशतको दरले ८ हजार डलर नाफा गर्ला भनेर अनुमान गरौं । अहिले अमेरिकामा वातावरण कर इत्यादी पश्चात् गाडी कम्पनीहरु १८ प्रतिशत नाफामा काम गरिरहेका छन् । इलन मस्कको लक्ष्य २५ प्रतिशत ‘ग्रस’ नाफा गर्ने छ ।
अहिले टेस्लाको कुल खर्च (अनुसन्धान तथा विकास, सामान्य खर्च, ब्याज) बार्षिक ८ अर्ब डलर पुग्ला भनेर अनुमान गरौं । यो हिसाबले टेस्लाको कर अघिको आम्दानी बार्षिक ८ अर्ब डलर पुग्नेछ । त्यो बेला उसको कुल बजार पूँजीकरण ८० अर्ब डलर पुग्नेछ । हाल टेस्लाको कुल बजार पूँजीकरण ४० अर्ब डलर छ ।
भविष्यमा जे पनि हुनसक्छ । २० लाख कार विक्री गर्न नसक्न पनि सक्छ । र, बेचिहाले पनि २० प्रतिशत नाफा नहुँन सक्छ । अथवा २० लाख कार बेच्न पनि सक्छ । २० लाख बेच्न सक्नेले ५० लाख बेच्न पनि सक्छ । अब, कुनको कति सम्भाब्यता छ भन्ने थाहा छैन । तर, टेस्ला तत्कालका लागि उम्केर नाफा कमाउन थाल्यो भने चाहिँ सफल हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । इन्साइड इभीबाट अनुवादित